Gymnase Antsirabe : Ho vita amin’ny volana jolay -
AccueilRaharaham-pirenenaGymnase Antsirabe : Ho vita amin’ny volana jolay
05/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy honohono. Nanomboka ny voalohandohan’ny volana desambra teo ny asa fanamboarana sy fananganana kianja mitafo maoderina ao Antsirabe, eny amin’ny Vatofotsy. Fotodrafitrasa maoderina tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena izany.
Araka ny fampitam-baovao, ny kaominina Ambonivohitr’Antsirabe no misahana ny fitantanana ny asa amin’izany. Voalaza fa anisan’ny fotodrafitrasa goavana ao Antsirabe ity kianja mitafo maoderina ity. Marihina mantsy fa mahatratra 2 ha ny velarantany hananganana ny kianja mitafo. Mahazaka olona hatrany amin’ny 3 000 ary manana fiantsonan’ny fiara eny ivelany, na « parking » mirefy 1 ha mahery sy fiantsonan’ny fiara ao anatiny.
Ankoatra izay, ahitana dobo filomanosana “semi-olympique” mirefy 25 m, izay ahitana efitra sy fizarana miisa enina (couloirs) ho an’ny mpifaninana. Ahitana toeram-pisakafoanana ihany koa ao amin’ity fotodrafitrasa vao hatsangana ity.
Ankoatra izay, afaka mandray fifaninanana iraisam-pirenena ity kianja mitafo moderina sady marolafy ity. Afaka mandray lalao eo amin’ny taranja basikety sy volley, ary ahitana kianja filalaovana tsipy kanetibe ihany koa.
Raha ny fanazavana hatrany, dia mitentina 3,4 miliara Ar ny tetibidin’ny fananganana io fotodrafitrasa ara-panatanjahantena goavana ao Antsirabe io. Amin’ny maha tetikasan’ny Filoham-pirenena ity kianja mitafo moderina vao hatsangana ao Vatofotsy Antsirabe ity, nidina nijery ny fandrosoan’ny asa tany an-toerana ny solontenan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny alalan’ny mpanolotsaina manokana, Mbola Rajaonah. Tamin’izany indrindra no nahitana fa efa any amin’ny 15%-n’ny asa fananganana no vita amin’izao fotoana izao.
Araka izany indrindra, hita ary tsapa ankehitriny fa tsy manadino ireo mpitia fanatanjahantena ny filoham-pirenena. Miezaka hatrany mantsy ny fitondram-panjakana amin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena isan-tsokajiny ho an’ny tanora.
Raha ny voalaza, dia tsy mijanona hatreo akory ny asa fananganana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ho an’ny tanora fa hihitatra amina faritra maro manerana ny Nosy, araka ny vinan’ny filohan’ny Repoblika. Amin’ny volana jolay kosa no hotokanana ity Gymnase Antsirabe ity.
Hisokatra indray ny orinasa miaramila ao Moramanga, izay efa nikatona nandritra ny 37 taona. Hamokatra bala ho an’ny firenena Malagasy izy io. Tsy ankifidy fa ny bala izy ampiasain’ny mpitandro ny filaminana dia hamboarina ao ...Tohiny